यो साता लगातार घटिरहेको सुनचाँदीको भाउ आज स्थिर (भाउ भने यस्तो !) spacekhabar
यो साता लगातार घटिरहेको सुनचाँदीको भाउ आज स्थिर (भाउ भने यस्तो !)
स्पेसखबर काठमाडौं, २५ मंसिर
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ घटबढ भइरहनु सामान्य हो । गत साताको अन्तिम दिन (शुक्रबार) प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ यो साता निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्था छ । यद्यपि आज बुधबार (साताको चौथो दिन) भने सुनचाँदी दुवैको भाउ भने स्थिर छ ।
साताको पहिलो दिन (आइतबार) प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको सुनको भाउ सोमबार पुन: २ सय रुपैयाँका दरले घटेको थियो । हिजो (मंगलबार) पनि सुन प्रतितोला २ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको थियो । आज (बुधबार) भने सुनचाँदीको भाउ अघिल्लो दिनकै कायम रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
आइतबार प्रतितोला १० रुपैयाँले घटेको चाँदीको भाउ सोमबार भने ५ रुपैयाँ प्रतितोला घटेर कारोबार भएको थियो । महासंघका अनुसार हिजो (मंगलबार) चाँदी प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको थियो भने आज (बुधबार) हिजोकै मूल्य अर्थात् प्रतितोला ८ सय ३० रुपैयाँ नै कायम छ ।
महासंघका अनुसार अस्ति (सोमबार) छापावाल सुन प्रतितोला २ सय रुपैयाँले घट्दै ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । हिजो (मंगलबार) पुन: २ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा भाउ घटेपछि छापावाल सुन ७० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज पनि हिजोकै भाउ अर्थात् ७० हजार ८ सय रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
आइतबार भने छापावाल सुन अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घट्दै ७१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
महासंघका अनुसार आज पनि तेजाबी सुन ७० हजार ५ सय रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको छ । हिजो पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । अस्ति (सोमबार) भने ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार भने तेजाबी सुन प्रतितोला ७० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
साताको पहिलो दिन (आइतबार) अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १० रुपैयाँ बढेर ८ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ सोमबार भने प्रतितोला ५ रुपैयाँले घट्दै ८ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार भने पुन: ५ रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला ८ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आजको भाउ स्थिर रहँदा चाँदी प्रतितोला सोही मूल्य अर्थात् ८ सय ३० रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको छ ।
व्यवसायीहरुका अनुसार सुनचाँदीको भाउ बढ्दा उपभोक्ताको आगमन कम हुने यद्यपि आवश्यक पर्नेका लागि किन्नुको विकल्प पनि थिएन । यद्यपि यो साता निरन्तर सुनचाँदीकै भाउ ओरालो लाग्दा उपभोक्ताको भीड सुनचाँदी पसलमा लागेको देख्न सकिन्छ । आज भने सुनचाँदीकै भाउ स्थिर रहँदा उपभोक्ता अलिअलि भए पनि राहत भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । बिहे लगनको महिना मानिने मंसिरमा सुनचाँदी खरिद-बिक्री राम्रैसँग हुन्छ । मंसिरलाई सुनचाँदीको कारोबार राम्रो हुने महिना अर्थात् सिजनको महिना पनि मानिन्छ । आज सुनको भाउ स्थिर रहँदा उपभोक्तालाई केही राहत हुने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २५, २०७६, १२:०४:००